पेटको अल्सर हुदाँ के के हुन्छ संकेत ?, यस्तो छ उपचार
विराटनगर २० भदौ । मानव शरीरको पेटमा खाना पचाउनका लागि सहयोग पुर्याउनका लागि विभिन्न प्रकारको एसिडहरु उत्पादन हुने गर्छ । पेटमा आफै बन्ने एसिडहरुले खानेकुरा पचाउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । पेटमा यस्तो एसिडको मात्रा बढी वा घटी हुन गएमा स्वास्थ्यमा समयसा आउने गर्छ । दुब्लाउनका लागि गरिएको डाइटिंग, व्रत, चिल्लो तथा पिरो खाने, अव्यवस्थित समयमा खाने, घरमा बनेको भन्दा बाहिरको जंक फुडहरु धेरै खाने कारण एसिडको मात्रा बढेर ग्यास्ट्रिक हुने गर्छ ।
कतिपय अवस्थामा एसिडले निम्त्याएको ग्यास्ट्रिक बिग्रिएर पेट तथा आन्द्राको विभिन्न ठाउँमा घाउ वा प्वाल बनाउने गर्छ । उक्त घाउलाई पेटको अल्सर भनिन्छ । पेट रोग विशेषज्ञ डा. राम बहादुर बोहोराका अनुसार पेटको समस्याका मुख्य कारण भनेकै दैनिक रुपमा खाने खानाले गर्दा हुने गर्छ । अव्यवस्थित समयमा खाने, घरमा बनको भन्दा बाहिरको धेरै खाने, जंक फुडको सेवन, धेरै खाने लोभ, तौल घटाउने विभिन्न प्रयासका कारण पहिले ग्यास्ट्रिक हुने गर्छ । पछि ग्यास्ट्रिक बिग्रेर अल्सरको समस्या देखा पर्न थाल्छ ।
अल्सर बिग्रेमा क्यान्सर समेत हुन सक्ने डाक्टरहरुले बताउने गरेका छन् । अल्सरबाट बच्नका लागि सुरुमा पेटमा ग्यास भरिन अर्थात् ग्यास्ट्रिक हुन दिनु हुदैन । दिल्लीको पुष्पावती सिंघानिया रिसर्च इन्स्टिच्यूटका वरिष्ठ ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डा. दिनेश सिंघलले पेटमा हुने थुप्रै प्रकारका अल्सर भएको संकेतबारे जानकारी दिएका छन् । पेप्टिक अल्सर हुँदा पेट भित्रको छालामा फोका उठ्ने, ग्यास्ट्रिक अल्सर हुँदा खाना खाएपछि पेट दुख्न सुरु हुने तर, डाइजिनजस्ता औषधीको सेवनपश्चात् आराम महसुस हुन्छ ।
ड्यूडिनल अल्सरको समस्या हुँदा अबेरसम्म भोको रहँदा पेट दुख्न थाल्छ भने खाना खाएपछि भने केहि आराम महसुस हुन्छ । इसोफेगर अल्सरमा आहार नलीको माथिल्लो भागमा फोका उठ्ने वा प्वाल पर्ने हुँदा धेरैजसो आहार नलीमा अत्यधिक जलन हुने गर्दछ । पेटको अल्सर हुदा पेट दुख्ने, पेट तथा छाती पोल्ने, पेट फुल्ने, उल्टी हुने, वाक वाक आउने, तौल घट्ने तथा बढ्ने, दिसाको रंगमा परिवर्तन, कब्जियत हुने, चाडै भोक लाग्ने, पेट नभर्ने जस्ता लक्षणहरु देखा पर्न सक्छ ।
खानपानमा विशेष ध्यान पुर्याउनुका साथै खाने समयको तालिका बनाएर त्यसलाई प्रयोग पनि गर्नु पर्छ । दैनिक हरियो सागसब्जी, मौसम अनुसारको फलफूल र पेटले सजिलै पचाउन सक्ने नरम खानेकुरा, पौष्टिक र सन्तुलित खाना प्रशस्त मात्रामा सेवन गर्ने गरेमा अल्सरबाट बच्न सकिन्छ । सकभर पेट खाली नराखी हरेक २ ३ घण्टामा शरीरलाई स्वास्थ्य राख्ने खाना खाई राख्नु पर्छ । पानी तथा झोलिलो पदार्थको पनि प्रसस्त मात्रामा सेवन गर्नु पर्छ । अस्लरबाट बच्नका लागि बढी चिल्लो, अमिलो र पिरो खानेकुराको सेवन गर्नु हुदैन ।
सकभर बाहिरको खानेकुरा, जंकफुड, क्यानफुड, प्याक गरिएको जुस नखानु नै स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ । बाहिर पाउने खानेकुरा भन्दा पनि घरमै बनेको खानेकुरा खाने बानी बसाल्नु पर्छ । घरमै पकाउदा पनि निकै सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ । मिठो खाने चक्करमा खानामा धेरै तेल, नुन, खुर्सानी, जथाभावी मसाला र रङ आदिको प्रयोग गर्नुहुँदैन । दुध तथा दुध जन्य पदार्थ, मैदा, धेरै क्याफेन भएको चिया, कफी, कोक, फ्यान्टा जस्ता कोल्ड ड्रिंक्स, धूम्रपान, मध्यपान र सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले पेटमा ग्यास पैदा गर्छ ।
पेटमा ग्यास पैदा हुने बित्तिकै ग्यास्ट्रिक निम्तिन सक्ने हुदा सकभर यस्तो कुरा बाट टाढा राख्नु पर्छ । यिनीहरुले पेटका मात्र नभएर मुखमा हुने विभिन्न अल्सरका मुख्य कारण पनि हुन सक्छन । साथै दुखाइ कम गर्ने, प्रेसर कम गर्ने र बाथरोगको औषधिबाट समेत अल्सर हुने गर्छ । त्यसैले, डाक्टरको सल्लाह बिना औषधिको प्रयोग गर्नु हुदैन । ग्यास्ट्रिकका सामान्य लक्षण देख्दा नै लापरवाही नगरी सावधानी अपनाउने हो भने भविष्यमा गएर अल्सर हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ ।